Koorsooyinka AulaGEO - Tababarka ugu fiican ee laga bixiyo Geo-Engineering - Geofumadas
Koorsooyinka AulaGEO - Tababarka ugu fiican ee laga bixiyo Geo-Engineering
Dhammaan koorsooyinkaKoorsooyinka - Naqshadeynta 3DKoorsooyinka - BIM MEPKoorsooyinka - Hawlgalka BIMKoorsooyinka - Qaab dhismeedka BIMKoorsooyinka - CivilWorksKoorsooyinka - GeospatialKoorsooyinka - LandWorksKoorsooyinka - Nolosha Badeecada
Koorsada Sayniska Xogta - Ku Baro Python, Plotly iyo xaashi yar
Waqtigan xaadirka ah waxaa jira dad badan oo xiiseynaya daaweynta tiro badan oo xog ah si loo turjumo ama loo gaaro go'aanno sax ah dhammaan ...
Koorso dhameystiran oo habka BIM ah
Koorsada Ansys Workbench 2020
Ansys Workbench 2020 R1 Mar kale AulaGEO waxay keeneysaa dalab cusub oo ku saabsan tababarka Ansys Workbench 2020 R1 ...
Koorsada ArcGIS Pro - aasaasiga ah
Baro ArcGIS Pro Easy - waa koorso loogu talagalay dadka xiiseeya nidaamyada macluumaadka juqraafiyeed, kuwaas oo raba ...
Koorsada AutoCAD - si fudud u baro
Kani waa koorso loogu talagalay in lagu barto AutoCAD oo xoqan. AutoCAD waa barnaamijka ugu caansan ee loogu talagalay naqshadeynta caawinta ...
Dhibcaha, sagxadaha iyo isku toosinta. Baro abuuritaanka naqshadaha iyo shaqooyinka aasaasiga ah ee tooska ah ee barnaamijka 'Autocad Civil3D' ee lagu dabaqay Dhulka ...
Iswaafajinta horumarsan, sagxadaha, qaybaha iskutallaabta. Baro abuuritaanka naqshadaha iyo shaqooyinka aasaasiga ah ee tooska ah ee barnaamijka 'Autocad Civil3D' ee lagu dabaqay ...
Darajooyinka, bulaacadaha nadaafadda, xirmooyinka, isgoysyada. Baro abuuritaanka naqshadaha iyo shaqooyinka aasaasiga ah ee tooska ah ee barnaamijka 'Autocad Civil3D' ee lagu dabaqay ...
Koorsada Dynamo ee mashaariicda injineernimada BIM
Naqshadeynta Kombiyuutarka ee BIM Koorsadani waa hage saaxiibtinimo iyo isbarasho ah oo dunida ku saabsan naqshada kombiyuutarka iyadoo la adeegsanayo Dynamo, oo ah madal ...
Koorsada Daabacaadda 3D iyadoo la adeegsanayo Cura
Kani waa koorso hordhac u ah qalabka SolidWorks iyo farsamooyinka tusaalooyinka aasaasiga ah. Waxay ku siin doontaa adag ...
Koorsada injineernimada qaabdhismeedka iyadoo la adeegsanayo Revit
Tilmaanta naqshada leh ee la socota Model Information Model loogu talagalay qaabeynta qaab-dhismeedka. Sawir, naqshadeyso oo dukumenti ...
Hordhaca Koorsada Dareenka Fog
Soo ogow awoodda dareenka fog. Tijaabi, dareemo, falanqee oo arag waxa aad samayn karto adigoon meesha joogin. The ...
Koorsada Qaabaynta Daadka - HEC-RAS oo laga soo bilaabay xoq
Siyaabaha iyo falanqaynta daadadka oo leh barnaamij bilaash ah: HEC-RAS HEC-RAS waa barnaamij ay leeyihiin Ciidamada Asluubta ee Injineerada ...
Koorsada 'Revit MEP Course' - Qalabka Farsamada ee HVAC
Koorsadan waxaan diiradda saari doonaa isticmaalka aaladaha Revit ee naga caawiya fulinta ...
Koorsada 'Revit MEP Course for Electrical Systems'
Koorsadan AulaGEO waxay baraysaa isticmaalka Revit-ka qaabeynta, qaabeynta iyo xisaabinta nidaamyada korantada. Waxaad baran doontaa ...
Koorsada Nidaamka Macluumaadka Juqraafiyeed ee leh QGIS
Baro sida loo isticmaalo QGIS iyada oo la adeegsanayo laylisyo wax ku ool ah oo la adeegsanayo QGIS. -Inta jimicsiga oo dhan waad awoodaa ...
Koorsada Mataanaha Dijital ah: Falsafadda loogu talagalay kacdoonka cusub ee dijitaalka ah
Hal-abuurnimo kastaa waxay lahayd kuwa raacsan oo markii la dalbado beddelay warshado kala duwan. Kombuyuutarka ayaa bedelay habka aan u wadno ...
Koorsada PTC CREO Parametric - Naqshadeynta, falanqaynta iyo jilitaanka (2/3)
Creo Parametric waa naqshadeynta, soosaarka iyo softiweeriyada barnaamijka PTC Corporation. Waa barnaamij u oggolaanaya qaabaynta, ...
Koorsada PTC CREO Parametric - Naqshadeynta, Jawaabaha iyo Jilitaanka (3/3)
Tiradu waxay qaadataa koorsada BIM 5D iyadoo la adeegsanayo Revit, Navisworks iyo Dynamo
Koorsadan waxaan diiradda saari doonnaa soo saarista tirada si toos ah moodooyinkayaga BIM. Waxaan ka wada hadli doonaa siyaabo kala duwan oo loo soo saaro tirada iyadoo la adeegsanayo ...